ဒီနှစ်ထဲမှာ ပြန်ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆံပင်ပုံစံ (၅) မျိုး - For her Myanmar
ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလိုပုံစံတွေကို အသည်းစွဲကြိုက်ခဲ့ဖူးမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်
ယောင်းတို့ရေ … ဖက်ရှင်က အမြဲ တစ်ကျော့ပြန်လည်တတ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ အခုလည်း ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆံပင်ပုံစံတွေ ပြန်ခေတ်စားလာမယ်တဲ့။ Stella ကတော့ ၉၀ ခုနှစ် ဆံပင်ပုံဆိုတာနဲ့ ငယ်ငယ်က အမေစည်းပေးတဲ့ နာနတ်သီးကြက်တောင်စည်းနှစ်ဖက်ပဲ ပြေးမြင်တော့တာပဲ။ ကဲပါ … စကားရှည်မနေတော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုဆံပင်ပုံတွေ ခေတ်စားလာဦးမလဲဆိုတာပဲ ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့။
၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ခေတ်အစားဆုံးဆံပင်ပုံကို ပြောပါဆိုရင် ထူထူပွပွဆံပင်တွေကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပြရမှာပဲ။ အခုဒီဆံပင်ပုံက ပြန်ခေတ်စားတော့မယ်ဆိုတော့ ပျော်ပြီလေ …
Related article >>> Sensitive skin ပိုင်ရှင်လား ? ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဒီအဆင့် (၄) ဆင့်ကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
သူ့ခေတ်သူ့အခါက နာမည်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ Britney Spears, Kate Moss, Naomi Campbell တို့ရဲ့ ဆံပင်အဖြောင့်အရှည်တွေကလည်း ဒီနှစ်ထဲမှာ ပြန်ရေပန်းစားလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဘာအရောင်ဆိုးဆိုး လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်ပုံစံမို့လို့ နှစ်ခါစဉ်းစားမနေဘဲ ပြေးသာညှပ်လိုက်ပါတော့။
ဆံပင်ကို ဘေးခွဲပြီး အလိပ်ကြီးကြီးတွေလိပ်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကလည်း ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဝက်ဝက်ကွဲခေတ်စားခဲ့တာပါ။ ခုချိန်မှာလည်း ဒီဆံပင်ပုံနဲ့သာ ပွဲတက်ရင် အရမ်းလှနေမှာအမှန်ပါပဲ။
အခုခေတ် bangs တွေနဲ့ ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က bangs တွေ မတူတဲ့အချက်ကတော့ အရင်ခေတ် bangs တွေက ပိုထူပိုကုပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို bangs တွေခေတ်စားလိုက်သေးတယ်နော်။ ဒီတော့ သူများနဲ့လည်း မတူချင်ဘူး bangs လည်း ညှပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ hairstyles ကို အားပေးပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
တိုပေ့ကပ်ပေ့ဆိုတဲ့ ဆံပင်ပုံစံတွေက ၉၀ ခုနှစ်တွေကနေ စခဲ့တယ်ဆိုတာ မှတ်မိသေးလား ယောင်းတို့? အတိုကိုမှ အထပ်အထပ်ပုံစံတွေ ညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံက ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွေမှာ မိန်းကလေးတိုင်း လိုက်ညှပ်ရလောက်အောင် ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ဆံပင်ပါ။ ခုလည်း တစ်ခေတ်ပြန်ထလာပြီနော်..
Related article >>> အရောင်ဆန်းတွေကို ဆရာကျကျတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ ဖက်ရှင်နည်းလမ်း (၅) သွယ်
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ဘယ်လိုဆံပင်ပုံစံတွေ ခေတ်စားလာတော့မှာလဲဆိုတာ Stella သတင်းပေးချက်အရ သိကုန်ကြပြီပေါ့နော်။ ဒါဆို သူများတွေ မသိခင်မြန်မြန်လေး သွားညှပ်လိုက်ကြဖို့ မမေ့ကြနဲ့ဦး …
ငယျငယျတုနျးက ဒီလိုပုံစံတှကေို အသညျးစှဲကွိုကျခဲ့ဖူးမယျဆိုတာ ရဲရဲကွီးအာမခံတယျ
ယောငျးတို့ရေ … ဖကျရှငျက အမွဲ တဈကြော့ပွနျလညျတတျတယျဆိုတာ အမှနျပါပဲ။ အခုလညျး ၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက ဆံပငျပုံစံတှေ ပွနျခတျေစားလာမယျတဲ့။ Stella ကတော့ ၉၀ ခုနှဈ ဆံပငျပုံဆိုတာနဲ့ ငယျငယျက အမစေညျးပေးတဲ့ နာနတျသီးကွကျတောငျစညျးနှဈဖကျပဲ ပွေးမွငျတော့တာပဲ။ ကဲပါ … စကားရှညျမနတေော့ပါဘူး။ ဘယျလိုဆံပငျပုံတှေ ခတျေစားလာဦးမလဲဆိုတာပဲ ကွညျ့လိုကျကွတာပေါ့။
၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက ခတျေအစားဆုံးဆံပငျပုံကို ပွောပါဆိုရငျ ထူထူပှပှဆံပငျတှကေိုပဲ လကျညှိုးထိုးပွရမှာပဲ။ အခုဒီဆံပငျပုံက ပွနျခတျေစားတော့မယျဆိုတော့ ပြျောပွီလေ …
Related article >>> Sensitive skin ပိုငျရှငျလား ? ညအိပျရာမဝငျခငျ ဒီအဆငျ့ (၄) ဆငျ့ကို လုပျဖွဈအောငျလုပျပါ
သူ့ခတျေသူ့အခါက နာမညျကြျောတှဖွေဈတဲ့ Britney Spears, Kate Moss, Naomi Campbell တို့ရဲ့ ဆံပငျအဖွောငျ့အရှညျတှကေလညျး ဒီနှဈထဲမှာ ပွနျရပေနျးစားလာနိုငျခွရှေိပါတယျ။ ဘာအရောငျဆိုးဆိုး လိုကျဖကျတဲ့ဆံပငျပုံစံမို့လို့ နှဈခါစဉျးစားမနဘေဲ ပွေးသာညှပျလိုကျပါတော့။
ဆံပငျကို ဘေးခှဲပွီး အလိပျကွီးကွီးတှလေိပျထားတဲ့ ဆံပငျပုံစံကလညျး ၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက ဝကျဝကျကှဲခတျေစားခဲ့တာပါ။ ခုခြိနျမှာလညျး ဒီဆံပငျပုံနဲ့သာ ပှဲတကျရငျ အရမျးလှနမှောအမှနျပါပဲ။
အခုခတျေ bangs တှနေဲ့ ၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက bangs တှေ မတူတဲ့အခကျြကတော့ အရငျခတျေ bangs တှကေ ပိုထူပိုကုပျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ဒီလို bangs တှခေတျေစားလိုကျသေးတယျနျော။ ဒီတော့ သူမြားနဲ့လညျး မတူခငျြဘူး bangs လညျး ညှပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီ hairstyles ကို အားပေးပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
တိုပကေ့ပျပဆေို့တဲ့ ဆံပငျပုံစံတှကေ ၉၀ ခုနှဈတှကေနေ စခဲ့တယျဆိုတာ မှတျမိသေးလား ယောငျးတို့? အတိုကိုမှ အထပျအထပျပုံစံတှေ ညှပျထားတဲ့ ဆံပငျပုံစံက ၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြတှမှော မိနျးကလေးတိုငျး လိုကျညှပျရလောကျအောငျ ရပေနျးစားခဲ့တဲ့ ဆံပငျပါ။ ခုလညျး တဈခတျေပွနျထလာပွီနျော..
Related article >>> အရောငျဆနျးတှကေို ဆရာကကြတြှဲဖကျဝတျဆငျနိုငျဖို့ ဖကျရှငျနညျးလမျး (၅) သှယျ
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ဘယျလိုဆံပငျပုံစံတှေ ခတျေစားလာတော့မှာလဲဆိုတာ Stella သတငျးပေးခကျြအရ သိကုနျကွပွီပေါ့နျော။ ဒါဆို သူမြားတှေ မသိခငျမွနျမွနျလေး သှားညှပျလိုကျကွဖို့ မမကွေ့နဲ့ဦး …
Tags: 90s, Beauty, Fashion, hair, hair styles, haircut, styles, trending
Stella April 30, 2019